Ny angano momba ny Amazona | Fitsangatsanganana tanteraka
Amin'ny sary an-tsaina malaza, ny Amazons dia mpiady mahery fo sy masiaka izay niady tany Persia na Gresy fahizay nitifitra ny tsipìkany tamin'ny soavaly. Betsaka ny angano momba azy ireo ary maro no nanontany tena raha misy marina ao amin'izy ireo.
Raha mbola nanontany tena toy izany koa ianao, amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka momba ny angano momba ny Amazona, iza izy ireo, avy aiza ary aiza no fantatsika momba azy ireo.
1 Iza ireo Amazona?
2 Nisy ve ny Amazona?
3 Inona no lazain'ny angano momba ny Amazona?
4 Iza no nivavahan'ny Amazona?
5 Inona ireo Amazona malaza indrindra?
Iza ireo Amazona?
Ny tantara momba ny Amazona izay tonga teto amintsika dia mifanaraka amin'ny angano grika. Araka ny filazany, ny Amazons dia olona mpiady taloha be izay notendren'ny vehivavy sy noforonina fotsiny.
Nolazain'ny Grika fa vehivavy be herim-po sy manintona izy ireo nefa mampidi-doza ary vehivavy tia ady. Izy ireo dia toa nonina tao amin'ny zanatany mitokana iray izay ny renivohiny dia Themiscira, hoy i Herodotus, tanàna mimanda ao amin'ny faritra avaratr'i Torkia ankehitriny.
Araka ny voalazan'ity mpahay tantara ity, ny Amazons dia nifandray tamina lehilahy Scythian ary raiki-pitia tamin'izy ireo saingy tsy te ho voafetra tamin'ny fiainana an-trano, ka dia namorona fiarahamonina vaovao eo amin'ny lemaka amoron-tsiraka Eurasia izy ireo izay nanohizany ny fanaon'izy ireo. razana.
Na izany aza, misy fanovana kely amin'ireo tantara voalaza momba ny Amazona. Ohatra, Araka ny filazan'i Strabo, isan-taona dia nandry tamin'ny lehilahy mpifanila vodirindrina aminy ny Amazons mba hamerenany sy hanohizany ny lalana. Raha niteraka zazavavy izy ireo dia hiara-maniry amin'izy ireo ho toy ny Amazon iray indray ilay zaza. Etsy ankilany, raha miteraka izy ireo, dia naverin'izy ireo tamin'ny lehilahy na tamin'ny tranga ratsy indrindra navelany na anaovany sorona.
Ho an'ireo mpanoratra toa an'i Paléfato dia tsy nisy mihitsy i Amazons fa lehilahy diso fiheverana vehivavy satria nanaratra ny volombavany.
Nisy ve ny Amazona?
Nandritra ny fotoana lava, ny angano momba ny Amazons dia izany fotsiny: angano. Na izany aza, tamin'ny 1861, ny manam-pahaizana klasika Johann Jakob Bachofen dia namoaka lahatsoratra iray izay niteraka ahiahy momba ny fisian'izy ireo satria nohamafisiny fa tena nisy ny Amazona ary nanomboka teo ambanin'ny fanambadiana ny zanak'olombelona.
Amin'izao fotoana izao, mpikaroka marobe no milaza fa ny tena angano momba ny Amazona dia mety hanana fototra tena izy. Tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX dia nisy nopropolis hita teo akaikin'ny sisin-tany manelanelana an'i Kazakhstan sy Russia, izay nahitana ny fatin'ireo vehivavy nalevina niaraka tamin'ny fitaovam-piadiany.
Tena nahagaga tokoa ny fahitana lohany zana-tsipìka ao anaty vatan'ny vehivavy iray izay maty maty tany an'ady. Ary koa ny taolan'ny tongotra miondrika tovovavy izay niresaka fiainana nitaingina soavaly.
Ny fanadihadiana samihafa natao dia nampiseho fa ny vehivavy dia Skytianina, foko mpifindrafindra monina nisy nandritra ny arivo taona nifanindry tamin'ny vanim-potoana archaic grika (taonjato faha-XNUMX - faha-XNUMX talohan'i JK). Nifanaraka ireo sombin-javatra ireo: tamin'ny fifindra-tanin'izy ireo dia tonga tany Torkia ny vahoaka Scythian ankehitriny, izay araka ny tantara angano dia tokony handray anjara amin'ny Ady Trojan izy ireo. Raha ny tena izy, voalaza fa ilay mahery fo grika Achilles dia nanana duel tamin'ny ady Trojan tamin'i Penthesilea, zanakavavin'i Ares, zanakavavin'i Amazon.
Nampiavaka azy tamin'ny fitrandrahana maro be nataony tany Troy nandritra ny fahirano azy talohan'ny nandresen'i Achilles azy tamin'ny fanindronana lefona ny tratrany. Nahita ny fahafatesany i Achilles ka nanaitra ny hatsarany ary nandevina azy teo amoron'ny renirano Scamander.
Maherin'ny ampahatelon'ny vehivavy Scythian hita amin'ny neropolises isan-karazany no nalevina niaraka tamin'ny fitaovam-piadiany ary maro no naratra tamin'ny ady, toy izany koa ireo lehilahy. Midika izany fa afaka niady niaraka tamin'ny lehilahy izy ireo ary tamin'ireny famantarana ireny dia hita ny fototry ny angano momba ny Amazona.
Inona no lazain'ny angano momba ny Amazona?
Ny angano momba ny Amazona dia mety ho fanitarana ny zava-misy nataon'ireo mpahay tantara grika sasany toa an'i Herodotus izay te hanome epic iray ho an'ny vahoaka mahery mpiady mahery vaika. Ny zava-drehetra dia toa manondro fa hyperbole tsotra fotsiny an'ny mpiady Scythian, izay nanjary fantatry ny tontolon'ny kilasy tamin'ny fahaizany mitifitra amin'ny tsipìka ary manjaka mitaingina soavaly.
Ny teny hoe amazona dia avy amin'ny teny grika "amanzwn" izay midika hoe "ireo izay tsy manana tratra." Izany dia milaza ny fomba fanaon'ny Amazona niaraka tamin'ny zazavavy rehefa teraka, izay notapahina ny tratra ka rehefa olon-dehibe izy ireo dia afaka nitantana ny tsipika sy lefona.
Rehefa mijery ny sanganasa aseho an-tsary ny Amazona isika dia tsy mahita ny fambara an'io fanazaran-tena io satria miseho miaraka amin'ny tratrany roa foana izy ireo na dia misy rakotra tsara aza. Ao amin'ny sary sokitra, ny Amazons dia solontenan'ny ady amin'ny Grika na maratra taorian'ny fihaonana ireo.
Etsy ankilany, ny Amazons dia voalaza fa nanangana tanàna maro toa an'i Efesosy, Smyrna, Paphos, ary Sinope. Amin'ny angano grika dia marobe ny fanafihana miaramila an'ny Amazons ary misolo tena azy ireo ho fahavalon'ny Grika.
Ireo tantara ireo dia mitantara matetika ny ady nifanaovan'ny mpanjakavavin'i Amazon sy ireo maherifo grika, ohatra ny ady tany Penthesilea tamin'i Achilles tamin'ny Ady Trojan na ny adin'i Hercules tamin'i Hippolyta, rahavavin'ilay teo aloha, ao anatin'ny iray amin'ireo asany roa ambin'ny folo. .
Voalaza koa fa ny Amazona dia avy amin'i Ares, andriamanitry ny ady ary avy amin'ny ny Harmony.
Iza no nivavahan'ny Amazona?
Araka ny efa nampoizina dia nivavaka tamin'i Artemis andriamanibavy i Amazona fa tsy andriamanitra. Izy dia zanaka vavin'i Zeus sy Leto, rahavavin'i Apollo kambana ary andriamanibavin'ny fihazana, bibidia, virijina, tovovavy, fiterahana. Ho fanampin'izay, dia voamarina fa nanamaivana ny aretin'ny vehivavy izy. Araka ny angano, Artemis dia nitari-dàlana ho an'ireo mpiady tsy manam-paharoa ireo noho ny fomba fiainany.
Ny Amazons aza dia nomena ny fananganana ny tempolin'i Artemis lehibe, na dia tsy misy porofo azo antoka aza izany.
Inona ireo Amazona malaza indrindra?
Pentesilea- Mpanjakavavy Amazonona izay nandray anjara tamin'ny ady Trojan tamim-pahasahiana tamin'ny ady. Maty teo an-tanan'i Achilles izy ary i Antianira no nandimby azy teo amin'ny seza fiandrianana. Voalaza fa izy no namorona ny hatchet.
Antianira: voalaza fa izy no nandidy ny fanapahana ny lahy rehefa teraka satria ny kilemaina dia nanatsara ny fitiavana.
Hippolyta: rahavavin'i Penthesilea. Nanana fehikibo majika izy izay ny heriny no nanome azy tombony mihoatra ny mpiady hafa tao amin'ny ady.
Melanipa: rahavavin'i Hipólita. Hercules dia voalaza fa naka an-keriny azy ary ho takalon'ny fahalalahany dia nitaky ny fehikibo majikan'i Hippolyta izy.
Otrera: dia tia ny andriamanitra Ares sy renin'i Hipólita.
Myrina: Resy ny Atlantika sy ny tafiky ny Gorgons. Izy koa dia nitondra an'i Libya.
Talestria: Mpanjakavavin'i Amazon ary voalaza fa nitaona an'i Alexander Lehibe izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ny angano momba ny Amazona
Ny toerana tsara indrindra hisitrihana any Maroc